'High Tension's' Director, Alexandre Aja 'Oxygen' Anowana Nyowani yeClaustrophobic Trailer
musha Horror Varaidzo Nhau 'High Tension' Director, Alexandre Aja 'Oxygen' Anowana Nyowani yeClaustrophobic Trailer
Zvakanaka kuona Aja achidzokera kumidzi yake yakanyanyisa yeFrance. Firimu rake razvino, Oxygen iri kudzokera kumashure uye kugara zvishoma pachimiro chayo. Izvo zvakare zvakare kudzokera kune ekutanga mazano kubva kumutungamiriri.
Mutsara we Oxygen inoenda seizvi:
Oxygen chiitiko chekupona cheFrance chinotungamirwa naAlexandre Aja. Iyi firimu inotaurira nyaya yemukadzi mudiki (Mélanie Laurent, 6 Underground, Inglourious Basterds), anomuka mune cryogenic pod. Iye haayeuke kuti iye ndiani kana kuti akazoguma sei ipapo. Sezvo zvaari kupererwa ne oxygen, anofanirwa kuvaka zvakare ndangariro yake kuti awane nzira yekubuda muhusiku hwake.
Kana iwe waona ake ekutanga mafirimu senge Kukwirira Kwakanyanya aka Chinjanai Romance, iwe unoziva kuti Aja mutungamiriri akakomba. Kushanda kwake muUS-kugadzira mafirimu kwakamuendesa kumabhajeti akakura uye kugadzirisa zvakare. Makomo Ane Maziso kwaive kutarisa kune hutsinye pane izvo director aigona. Kunyangwe na Makomo Ane Maziso uye magirazi, yaigara yakagara kumashure kwepfungwa dzangu zvekuti ndaishuvira kuti dai aishanda paIp yake yekutanga IP. Ndosaka Oxygen inonakidza kwazvo.
Oxygen nyika pamusoro Netflix chete kutanga May 12.
Muri varume munofara here kuona Aja achidzokera mumashure ake akanyanyisa? Tiudzei muchikamu chemashoko.
David Lynch fan rollcall! Kana usati waona yake yakanzurwa HBO mutyairi weHotera Kamuri, saka unofanirwa kuzvitarisa apa.